Liibaan Cabdulle oo ku guuleeystay tartanka gabyaaga deegaanadda ajaanibtu degto ee Iswiidhan | Somaliska
Tartan xagga gabayada ah oo lugu qabtay magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan ayaa waxaa kaalinta koowaad galay Liibaan Cabdulle oo ah 20 jir u dhashay dalka Soomaaliya.
Tartankan oo loo qabtay magaalooyinka waa weeyn ee dalka loona qabtay xaafadda ay ajaanibtu ku badan tahay ayaa waxaa Liibaan uu noqday gabyaagii galay kaalinta koowaad. Liibaan waa arday dhameeystiraya shahoodooyinka ugu gudbi lahaa jaamacadda qeybteeda daawooyinka, wuxuu dhinaca kalena ka shaqeeya xarrunta dhalinyaradu iskugu timaado ee ku taala xaafada Tensta oo ah xaafaddaha ay soomaalida iyo ajaanibtu u badan yihiin.
Mar uu ka hadlayey nuxurka iyo fariinta uu xambaarsan yahay gabeygiisa ayuu sheegay inuu ku faraxsanyahay qoraalka uu diyaariyey balse dadka qaar ay u arkaan inuu eed sheeganayo laakin uu ku tilmaamay ineey tahay mid la xirriirta dhacdooyinka uu maalin walba arko.
Tartankan gabayada ee xaafadaha ajaanibta ayaa waxaa uu noqonayaa mid abaal marin loo siin doono Liibaan iyo gabeygiisa adduun dhan 25.000 (shan iyo labaatan kun) oo karoonka iswiidhish-ka ah.
“Gabeygu waa habka keliya ee aan ku gudbin karo codkeeyga iyo dareenkeyga iyagoo qoraal ah” ayuu yiri Liibaan oo ka hadlayey sida uu arko guusha uu gaaray.
Waa magaca uu u bixiyey gabeygiisa Liibaan, wuxuu sheegay in hooyadiis, walaashiis ay ku dhiirageliyeen ka sokow in qundhoodu yihiin madow,oo dadka madoow ee ku dhaqan Iswiidhan la kulmaan midabtakoor, tacadi iyo aflagaado. Liibaan oo misna ka sii hadlaya cunsusiyada qarsoon ee dalka ka jirta ayuu ku sifeeyey labbo nooc oo midkood ku sheegay ineey tahay cunsuriyadda qaboow.
“Haddii aan shaqo doonto sheegana inaan daganahay xaafadda Tensta,wuxuu shaqo bixiyahu igu qiimeynaya halka aan deegaan ahay deganahay iyo meeshaan ka imid, taasoo ah sawirka uu ka maqlay xaafadda Tensta. Taasi waxaan ku tilmaami lahaa cunsuriyadda qaboow, maxaa yeelay iyada ah tan ugu halis-san noocyadda ay cunusriyada ka kooban tahay. Lamana oga tan iyo inta ay cunusriyadaasi qaboob jireeyso, Marba haddii lugugu qiimeeynayo deegaan, magac iyo . Waa taa cunsuriyadda runta ah ee qaboow” ayuu yiri Liibaan Cabdulle oo sharax ka bixinayey magaca “haweeney madoow” ee gabeygiisa ugu magac darray iyo wejiyada cunuriyada dalkaan ka jirta ee lugula kaco guud ahaan ajaanibta iyo gaar ahaan dadka madoow oo ay soomaalidu ka mid tahay.
Heerka shaqo la’aanta oo hoos u dhac ku yimid.
Liibaan waa nin aad u yar oo karti leh maansha allaah waxaan ku dhiiri gelinayaa in uu dadaal kiisa sii wado qaab fiican ayuu u gudbiyey dareenkiisa iyo dadkuu ka soo jeedo dhibaatada ey qabaan asagoon calaancalin